ATN: Blog Day 2011 အမှတ်တရ
အလုပ်များနေတဲ့ကြားက ကျနော့်ရဲ့ တက်ဂ်ပို့စ်လေး ရေးပေးတဲ့ အကို့ကို ကျေးဇူး တကယ်တင်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ အားလုံးကို ညီအကို မောင်နှမ ဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ နေရာတွေထဲမှာ ဒီနေရာဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ၊ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ အကိုကြီး ...
ံHappy Blog Day ပါအကို.
အကိုရင်နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ စာတိုင်းက မိညီမအတွက်တော့ ဖတ်ရင်းခံစားရပါတယ်။ ပျော်စရာရေးရင်လည်းပျော်တယ်. လွမ်းစရာရေးရင်လည်းလွမ်းတယ်. ခံစားဖွယ်ရေးရင်လည်း ခံစားရတာပဲ...။
အကိုရင်ထဲကထွက်ကျလာမယ့် အနုပညာခံစားချက်တွေကို အမြဲတမ်းခံစားချင်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘလော့ဂ်ဒေးပါ atn ရေ။
ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းလေးတွေ မရပ်ပဲ ဖတ်သွားပါတယ်ကွယ်း)
Happy blog day ပါအကို :):)
happy blog day ပါအကို
fbမှာလာအပ်ထားတာကိုတွေ့ လို့ ရောက်လာခဲ့ တာပါ။
ခင်မင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း ရေးချင်တာရေးတယ် ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ် ....